Tantaran’i Joba sy ny fijalian’i Jesoa Kristy – FJKM Ambavahadimitafo Tantaran’i Joba sy ny fijalian’i Jesoa Kristy |
Tantaran’i Joba sy ny fijalian’i Jesoa Kristy
Publié le 07 avril 2009 à 01:04
Tantaran’i Joba sy ny fijalian’i Jesoa Kristy no nokarakarain’ny Vaomieran’ny Aim-panahy nandritra ny fotoam-pivavahana Alahady 05 avril 2009 maraina.
Hita tao ny maha-izy azy an’i Joba, ny fitsapana nahazo azy ary ny fahafahany indray. Naseho teo an-kilan’izany ny fijaliana nahazo an’i Jesoa tao Kalvary.
Fiainampanahy vaovao tokoa no niainan’ny fiangonana tao, indrindra noho ny fisian’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo tao anatin’ny tantara sy ny fampiraisana ny mpiangona rehetra amin’ny alàlan’ny fifanolorana teny masina ary koa ny fiarahana mandihy ao anaty trano fiangonana !
Talohan’ny fidirana moa dia efa nisy ny fanasan-tongotra izay nizotra tsara ka nandraisan’ny olona hafatra manokana.
Ankafizo ary ny sary vitsivitsy tamin’io fotoana mihavaka io, izay hifampizaranay aminao am-pifaliana tokoa!